Abaguquleli abaPhezulu abaPhezulu abaPhezulu kunye nababoneleli - iTshintsho eliPhezulu eliPhezulu leFektri yaseChina
Isiguquli sokuhamba rhoqo
Kwisiguquli sokuhamba rhoqo. usebenzisa Helical Winding ukuphumeza DC ukumelana esezantsi (DCR), kunye inductance eliphezulu. Siyila indlu e-aluminium ehambelana nayo.Ialuminiyam izindlu Ikhangeleka intle kwaye inokumelana ngcono nokubola.Ngapha koko, ukuqhuba kwe-thermal kwe-aluminium alloy kungcono, ke ukusebenza kobushushu kungcono.
Amaza ombane aphezulu
Isiguquli sokuhamba ngesantya esiphezulu sisetyenziswa ikakhulu njengombane oguqula isantya sokuhambisa umbane kwisantya esiphezulu sokuhambisa umbane, kwaye zikwasetyenziswa njengombane osisigxina sokuguqula umbane kwisiguquli samandla ombane aphezulu kunye noomatshini bokuhambisa inverter ephezulu. Ngokobuninzi bokusebenza, inokwahlulahlulwa ibe ngamanqanaba aliqela: 10kHz-50kHz, 50kHz-100kHz, 100kHz ～ 500kHz, 500kHz, 1MHz, nangaphezulu kwe-1MHz. Kwimeko yamandla amakhulu okuhambisa, izixhobo zombane zisebenzisa ii-IGBTs ngokubanzi. Ngenxa yesimo se-tailing sokucima yangoku kwe-IGBT, ukusebenza rhoqo kuncinci; ukuba amandla okuhambisa mancinci, ii-MOSFET zinokusetyenziswa, kwaye ukusebenza rhoqo kuphezulu.
I-booster tripod transformer
I-Tripod inductor, ekwabizwa ngokuba yi-autotransformer, sisiguquli esinamajikojiko enye kuphela. Xa isetyenziswa njengesinyanzelo esisezantsi, inxalenye yokujika kweengcingo ikhutshiwe ukusuka ekubhijeleni njengokujija kwesibini; xa isetyenziswa njenge inyathelo-sombane sombane, ivolthi esetyenzisiweyo isetyenziswa kuphela kwinxalenye yocingo lokujikajika. Ngokubanzi, ii-windings zokuqala nezesekondari zibizwa ngokuba zii-windings eziqhelekileyo, kwaye ezinye zibizwa ngokuba zii-windings ezilandelelanayo. Xa kuthelekiswa neziguquli eziqhelekileyo, i-autotransformer enomthamo ofanayo inobungakanani obuncinci kunye nokusebenza okuphezulu, kwaye kokukhona amandla amakhulu esiguquli, kokukhona ombane ephezulu. Le nzuzo ibalasele ngakumbi.
Uluhlu lwexabiso lokungenisa: 1.0uH ~ 1H